पल्सर १५० ट्विन डिस्क लन्च - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 Headline2 Main News National स्थानीय पल्सर १५० ट्विन डिस्क लन्च
पल्सर १५० ट्विन डिस्क लन्च
Marganugamidaily प्रकाशित समय 4:43:00 AM
गेलबजार, २८ साउन । नेपालमा सर्वा्धिक विक्री हुने मोटर साईकल ब्राण्ड बजाजले पल्सर १५० ट्विन डिस्कको नयां मोड बजारमा ल्याएको छ । मोटर साईकलको स्पोर्ट सेग्मेन्टमा नयां आयाम थप्नको लागि पल्सर १५० ट्विन डिस्कको डिजाइन गरिएको छ र यो बाईकले ग्राहकलाई नयां जोश र नयां अनुभूती प्रदान गर्नेछ ।
यो नयां पल्सर मोटरसाईकल प्रविधि र डिजाईनलाई त्यसरी नै पूनः परिमाणित गर्नेछ जसरी पल्सरले २००१ मा पहिले गरेको थियो । पल्सर बाइकका मोडलहरु लन्च भएदेखि नै आफ्नो आधुनिक एवं पृथक डिजाइन र उत्कृष्ट परफ्रमेन्सको लागि चिर परिचित छन् ।
कम्पनीको रणनितिबारे चर्चा गर्दै गुप्ता ब्रदर्श मिर्चैयाका प्रोपराईटर राजु गुप्ताले भने यसमा रहेको १५० सिसि डि.टि.एस. आई.इन्जिनले दिने १४ पि.एस. पावरले ग्राहकको दैनिक जिवनमा रोमाञ्चक एवं अरामदायी यात्राको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ । यो अतुलिय पावर र माइलेजको उत्कृष्ट सामायोजन ले यस सेग्मेन्टको वाइकहरु मध्येमा उत्कृष्ट हो । जसलाई आरामदायी सवारीको आनन्द लिनु छ उनीहरु को लागि पल्सर १५० ट्विन डिस्क सच्चा सहयात्री हुनेछ ।
नयां पल्सर माइलेजको अतुलीय समायोजन हुनुका साथै यसमा थुप्रै अन्य विशेषताहरुले सुनिश्चित छ । जुन विशेषताहरु यस प्रकार छन् । १५० सिसि डि.टि.एस.आई. इन्जिनः उत्कृष्ट १४ पि.एस.पावर र उत्कृष्ट माइलेजको लागि, डिजिटल मिटर ः आधुनिक एवं आकर्षक, ट्विन डिस्क ः ब्रेकिंग क्षमता बढाउंछ । नाइट्रोक्स सन्स्पेन्सन ः आरामदायी सवारीको सुनिश्चितता गर्दछ । डि.सी. इग्निशन तथा लाइटिगं सिस्टम ः सजिलो स्टार्ट र एकनाशको प्रकाशको लागि, बाइड ट्यूवलेस टायरहरु ः अझ राम्रो रोड ग्रीप र सुरक्षाको लागि । विग डायामिटर फ्रन्ट फोर्क ः स्पोर्टी लुक्स र सस्पेन्सनलाई बलियो बनाउंछ । यसैबीच, सिमित अवधीका लागि पल्सर १५० ट्विन डिस्क मूल्य २ लाख ५५ हजार ९ सय मात्र कायम गरिएको छ भने यो पल्सर १५० ट्विन डिस्क तीन आकर्षक रंगहरुमा उपलब्ध छन् । यो बाइक बजारमा आज लन्च भएकै दिन बुक भइसकेको गुप्ता ब्रदर्श मिर्चैयाका प्रोपराईटर राजु गुप्ताले बताए ।